Ra’isul Wasaare Kheyre oo la kulmaya mooshinkii ugu culsaa ee abid xukuumad laga keeno – Somali Top News
Ra’isul Wasaare Kheyre oo la kulmaya mooshinkii ugu culsaa ee abid xukuumad laga keeno
Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa wajahaya mooshin garbo badan oo ay soo abaabuleen xubno katirsan xildhibaanada Golaha Shacabka iyo siyaasiyiin xilal kala duwan dalka ugu soo qabatay.
Mooshinkan oo ah mid xoog leh waxaa gadaal ka riixaya Beesha Caalamka oo aaminsan in Kheyre uu yahay shaqsiga kaliya ee caqabadda ku ah dowlad wanaaga dalka maadama uu mas’uul ka yahay caburinta mucaaradka dowladda iyo joojinta wada shaqeyntii maamul goboleedyada dalka.
Waxyaabaha kale ee Ra’isul wasaaraha lagu dhaliilay waxaa kamid ah inuusan fulin balanqaadkii madaxweynaha ee ahaa in Al shabaab dalka looga saaro muddo Labo sano ah si ciidamada AMISOM ay u baxaan.
Kheyre waxaa kaloo lagu dhaliilay inuu sameestay maleeshiyaad murusade ah oo uu isku difaaco kuwaa oo markii Farmaajo ogaaday lakala diray.
Beesha Caalamka ayaa aaminsan in Kheyre uusan shaqo ku laheyn arrimaha siyaasadda islamarkana uu aqoontiisu ku egtahay arrimaha Bini’aadanimada.
Ragga ugu waa weyn ee mooshinka bilaabay waxaa kamid ah Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee golaha Shacabka Cabdiwali Ibraahim Muudeey oo ka soo horjeeda ansixinta sharciga doorashooyinka iyo kan shidaalka dalka, oo mooshin ay ka diyaarinayaan xildhibaano u dhaw madaxtooyada haba ugu badnaadaane kuwa Golaha Wasiiradda ee Kheyre.
← UK opens military training facility in Somalia
Dowladda Soomaaliya oo go’aan kama dambeys ah ka qaadaneysa xeriirka Kenya iyo Itoobiya →
Isbadal balaaran oo lagu sameeyay Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka
Madaxweyne Farmaajo oo si diiran loogu soo dhaweeyay dalka Burundi